Tag: azụ n'ụlọ akwụkwọ ụlọ ahịa | Martech Zone
Tag: azụ azụ ụlọ ahịa
Back-to-School bụ nke abụọ nnukwu oge ịzụ ahịa n'afọ na ụwa dijitalụ abụrụla akụkụ dị mkpa nke ụzọ ndị ahịa na-azụ. Laa azụ mmefu ụlọ akwụkwọ N'afọ a, NRF na-eme atụmatụ ịkwụ ụgwọ naanị ụlọ akwụkwọ mahadum ga-aza maka ijeri $ 54.5 dị ịtụnanya. Tinyere mmefu k-12, ịzụ ahịa ụlọ akwụkwọ ruru ihe ruru ijeri $ 80.7, gbadaa site na $ 82.8 ijeri afọ gara aga. Na 2018, 23 pasent nke mmefu ụlọ akwụkwọ mere na ntanetị. N'afọ a, pasent 29 nke ịzụ ahịa ụlọ akwụkwọ ga-abụ